विश्व बैंक भन्छः यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २६ मंसिर
विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा विश्व बैंकले ६.४ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
बैंकले नेपालको आर्थिक विवरणको विश्लेषणात्मक तथ्यांक प्रकाशन गर्दै यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सेवा क्षेत्रको वृद्धि, रेमिट्यान्सको उच्च आप्रवाह र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० ले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने विश्व बैंकको ठहर छ ।
विश्व बैंकले नेपाल डेभलेपमेन्ट अपडेट सार्वजनिक गरेको छ । सो अपडेटमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै वर्ष बनिसक्ने, ठूला होटल तथा पर्यटकीय ठूला पूर्वाधारमा भएका लगानीले वृद्धिदरलाई सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा भएको विस्तारले व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, धानको उत्पादन केही कमी आए पनि उद्योग क्षेत्रमा राम्रा संकेत देखिएकाले उच्च वृद्धिदर कायमै हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । जलविद्युत तथा सिमेन्ट उद्योगमा भएको लगानी तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल आउने समय सुरु भएकाले पनि अर्थतन्त्र थप विस्तारित हुन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय गरेका नीतिगत सुधारका कारण वैदेशिक लगानीमा वृद्धि हुने अवसर भएको विश्व बैंकको अनुमान छ । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, वान स्टप सेन्टरको स्थापना तथा डुइङ बिजनेस सुधार इकाइको व्यवस्थाले लगानी आकर्षित हुन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
मूल्यवृद्धि भने ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहने विश्व बैंकको ठहर छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो अपडेट सार्वजनिक गरेका थिए । अपडेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्व बैंकको प्रक्षेपणप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चित्त दुखाएका हुन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २६, २०७६, १०:५२:००